သိုင်းပြောင်းပြန် ပညာစဉ်၊ သမားစဉ် ဂါရဝပြု အခမ်းအနား - Thaing Wizard
သိုင်းပြောင်းပြန် ပညာစဉ်၊ သမားစဉ် ဂါရဝပြု အခမ်းအနား ပုံရိပ်အချို့
သိုင်းပြောင်းပြန် Website များ…
သိုင်းပြောင်းပြန်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Facebook Account နဲ့ Fan Page များ…
ခူးကာချန့် – သိုင်းပြောင်းပြန် TBB Ku Kar Chant,
သိုင်းပြောင်းပြန်ပုသိမ်. Thaing Byaung Byan Pathein,
ခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန် – Thaing Byaung Pyan
Source 1 (ကိုးကား-၁): www.facebook.com/thaingbyaung.byan/posts/1420628534821333
Source2(ကိုးကား-၂): http://www.myawady.net.mm/allnews/local/item/29650-2013-11-05-08-50-50
ခုတစ်လော အချိန်သိပ်မရတာနဲ့ post အသစ်မတင်ဖြစ်ဘူးဗျာ။ လကုန်ခင်အတွင်းတော့ စာအုပ်အသစ်တွေ ထပ်တင်ပေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သိုင်းလေ့ကျင့်နည်းစာအုပ်တွေရော… သိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သမိုင်းကြောင်း/ဝတ္တုစာအုပ်တွေရော (တရုတ်သိုင်းဝတ္တုစာအုပ်များမပါ) တင်ပေးစရာတွေရှိပါတယ်။
This entry was posted in Martial Arts, Martial Arts Article, News, Thaing Byaung Byan and tagged ဆောင်းပါး, သတင်း, သိုင်းပြောင်းပြန် by athtet. Bookmark the permalink.